​साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक लगभग स्थिर, कारोवार रकम पनि घट्यो
आईतवार, चैत्र १५, २०७१ साल,
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक लगभग स्थिर रहेको छ । आइतवार अघिल्लो दिनको बन्द विन्दुभन्दा शून्य दशमलव १ अङ्क माथि (९ सय ४२ दशमलव ५) बाट बजार खुलेको हो ।
बजार खुलेको केही समयदेखि ओरालो लाग्न थालेको नेप्से परिसूचक ९ सय ३८ दशमलव ९८ अङ्कसम्म ओर्लिएको थियो । तर, त्यो समय टिकिरहन सकेन । बाटो परिवर्तन गरी उकालो लाग्न थालेको नेप्से परिसूचक ९ सय ४२ दशमलव ३ अङ्कमा पुगेर बजार बन्द भयो । यो अघिल्लो दिनको बन्द विन्दुभन्दा शून्य दशमलव १ अङ्क ९शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत तल हो ।
गत साताभरी ओरालो लाग्दा नेप्से परिसूचक २० अङ्कले घटेको छ । सो अवधिमा अधिकांश कम्पनीहरुको पनि शेयरमूल्य घटेको थियो । सोही कारण आइतवार केही लगानीकर्ताले अन्तिम समयमा राम्रो कम्पनीको खरीद चाप बढाएपछि बजार उकालो लागेको हो ।
सामान्यतया पहिलो र अन्तिम व्यापार दिनमा शेयर बजार परिसूचक बढ्ने गर्दछ । आइतवार लगभग साढे ३ अङ्कले घटिसकेको शेयरमूल्य अन्तिम समयमा बढेको हुनाले आगामी दिनमा बजार बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, अहिले शेयर बजार ओभर सोल्ड जोन अथवा १४ दशमलव ६ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको विक्री चाप खरीद चापको तुलनामा बढी रहेको देखाउँछ । ओभर सोल्ड जोनलाई शेयर खरीद गर्ने समय पनि भनिन्छ ।
आइतवार ‘अन्य’ समूहको परसिूचक सर्वाधिक १ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, होटेल समूहको परिसूचक १ दशमलव १८ र बीमा शून्य दशमलव २७ प्रतिशतले बढेको छ । सो दिन बैङ्किङ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ३२, वित्त कम्पनी शून्य दशमलव ३१, विकास बैङ्क शून्य दशमलव २६ र जलविद्युत् शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशतले घटेको छ ।
आइतवार नेप्सेमा १ हजार १ सय ५५ व्यापारबाट १ सय २० कम्पनीको ३ लाख ११ हजार कित्ता शेयर खरीदविक्री भयो । जसबाट रू. १२ करोड ५१ लाख रकम परिचालन भयो भने रू. ९ खर्ब ६७ अर्बको कुल बजार पूँजीकरण भयो । सो दिन नेपाल एसबीआई बैङ्कको सर्वाधिक रू. १ करोड १६ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भयो । आइतवार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयरमूल्य सर्वाधिक ६ दशमलव ११ प्रतिशतले बढ्यो । त्यसैगरी, सनराईज बैङ्कको स्रस्थापक शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी ९ दशमलव २७ प्रतिशतले घट्यो ।